Al-Shabaab oo weerartay saldhig booliiska Kenya oo ku yaalla xuduudda. - Wargeyska Faafiye
Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in inka badan 100 dagaalyahannada Al-Shabaab oo hubeysan ay xalay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaalla deegaanka Diif ee gobolka waqooyi-bari, una dhow xuduudda Soomaaliya.
Taliyaha booliiska deegaankaas, Joseph Boinnet oo weerarka xaqiijiyey ayaa sheegay in inkastoo tirada soo weerartay saldhigga ay badneyn haddana askarta ay iska difaaceen, hal askarina laga dhaawacay.
Ilo kale oo booliiska ka tirsan oo ka gaabsaday in la magacaabo ayaa iyaguna sheegay in maleeshiyada ay saldhigga kala baxsatay 10,000 oo xabo oo rasaas ah, 13 qoriga Ak47, dharka booliiska iyo agab kale.
Saldhigga Diif ee la weeraray ayaa sidan oo kale bishii April ee sannadkan ay Al-Shabaab u galeen, iyagoo ku dhaawacay saddex askari, kana dhacay gaari booliisku lahaa.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random Posts10 killed in fighting between Somali soldiers in Mogadishu.Karachi polio killings: Vaccination workers shotQaraxyo ka dhacay Muqdisho.Police release photo of German Alshabaab suspect.Xeer ilaaliyaha Minnesota Andrew Luger ooka hadlay dhaliyaradii dagaalka siiriya iyo Iraq aadey